သဘာဝဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံသည်နျူကလိယ accumbens တွင် AMPA နှင့် NMDA receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲစေပါသည် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(4): e34700 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0034700 ။ EPub 2012 ဧပြီ 18 ။
အိုး KK, Schmid S က, di Sebastiano AR, ဝမ် X ကို, Laviolette SR, Lehman MN, Coolen LM.
ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, ဆေးပညာ Schulich ကျောင်းနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ, အနောကျပိုငျးအွန်, လန်ဒန်၏တက္ကသိုလ်, အွန်, ကနေဒါ၏ဦးစီးဌာနများ။
အလွဲသုံးစားမှုသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ mediates သော mesolimbic system ကိုအပေါ်သို့ဆုံ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါး-related အမှတ်တရများနှင့်စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်အထောက်အကူပြုသောမှတ်တမ်း morphological နှင့် Synaptic အပြောင်းအလဲအပါအဝင်ဒီစနစ်အတွက်အာရုံကြော adapter, သွေးဆောင်။ ယခင်ကကအထီးကြွက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူအစီရင်ခံထားသည်, ထို mesolimbic စနစ်အလားတူ neuroplasticity induces နှင့်သဘာဆုလာဘ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အပြုအမူသက်ရောက်သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကမိတ်လိုက်တာရှည်-တည်မြဲအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်အချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှုသို့မဟုတ် function ကို ionotropic,3ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ် abstinence ကာလအောက်ပါရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်: 1 နေ့, 1 အပတ်က, ဒါမှမဟုတ် 1 လနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက်.
အထီး Sprague Dawley ကြွက်5ရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်း mated (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက) သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အစေခံရန်လိင်ရင်တော့မှားမယ်နျြရစျ။ လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားတစ်ဦးချင်းစီအချိန်မှာစတင်များနှင့်မိတ်လိုက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို၏ပံ့ပိုးကူညီပြသ။ ၏ယင်းနောက် intracellular နှင့်အမြှေးပါးမျက်နှာပြင်စကားရပ် N-methyl-D-aspartate (NMDA: NR1 subunit) နှင့် α-အမိုင်နို-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate (AMPA: GluA1, GluA2 subunits) receptors အဆိုပါ NAc အတွက်အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်နေတဲ့ bis (sulfosuccinimidyl) suberate (BS (3)) ပရိုတိန်း Cross-ချိတ်ဆက် assay သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
NR1 စကားရပ်မျက်နှာပြင်မှာ intracellular နှစ်ဦးစလုံး 1 နေ့က abstinence မှာတိုးလာပေမယ့် abstinence ၏ 1 သီတင်းပတ်မှာမျက်နှာပြင်မှာလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ GluA2 1 သီတင်းပတ်မှာ intracellularly တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် abstinence ၏ 1 တစ်လပြီးနောက်မျက်နှာပြင်မှာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တပြင်လုံးကို-ဆဲလ် patch ကိုညှပ် electrophysiological အသံသွင်းဆုံးဖြတ်ထား အားလုံးဆုလာဘ် abstinence ကာလပြီးနောက်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက် cortical afferents ၏ဆွအောက်ပါ NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက် Synaptic ရေစီးကြောင်း၏ AMPA / NMDA အချိုးကိုလျှော့ချ.
အတူတူအဲဒီဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ NAc အတွက်အချိုမှု receptor စကားရပ်နှင့် function ကိုအတွက်ရေရှည်ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖော်ပြသည်။ တစ်ထပ်တည်းမဖြစ်သော်လည်း, ဒီလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် neuroplasticity ကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအားဖြည့်များအတွက်ဘုံယန္တရားများအကြံပြုခြင်း, psychostimulants ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းမှတူညီပါတယ်။
အဆိုပါ mesolimbic စနစ် ventral tegmental ဧရိယာ, medial prefrontal cortex (mPFC) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) အပါအဝင်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဧရိယာပါဝင်ပါသည် . အတူတူအဲဒီဦးနှောက်ဧရိယာများနို့တိုက်ကျွေးရေးအပါအဝင်သဘာဝကြိုးအပြုအမူတွေကိုဖျန်ဖြေ , , , , အရက်သောက် , မိခင်အပြုအမူ လူမှုရေးစဘွန်း ,  နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ behavior , , , , ။ အမူအကျင့်လေ့လာမှုများအထီးကြွက်သုတ်ရည်ထိများအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွဲ့စည်းရန်အဖြစ်အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုးများနှင့်အားဖြည့်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ , , T-ဝင်္အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြေးအမြန်နှုန်းဖွံ့ဖြိုး ဖြောင့်-လက်မောင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်း  သို့မဟုတ်အတားတောင်တက် နှင့်လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှအော်ပရေတာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင် , ။ ထိုမှတပါး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း, ဖြစ်ပေါ်စေသည် နှင့် မိတ်လိုက်ဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစကားရပ် . ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကိုမိတ်လိုက်အပြုအမူအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ်ကိုပြောင်းလဲကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့တွေးဆသောသဘာဝအဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ဖြစ်ပျက်မှုအကြံပြု .
ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုတှငျကြှနျုပျတို့ယခင်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအလှည့်၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက်အရေးပါခဲ့သည့် NAc အတွက် deltafosB တစ်ခု upregulation စေပြခဲ့ကြ .
ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ NAc အတွက်ကျောရိုး၏ dendritic Arbore နှင့်အရေအတွက်တိုးစေသော . ကူးယူခြင်းနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်အပြောင်းအလဲများကို psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြ , , . လိင်အတွေ့အကြုံကို psychostimulant-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု (လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive) ထိခိုက်မခံတဲ့နှင့်တိုးမြှင် psychostimulant ဆုလာဘ်အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုန့်ပြန်ပြောင်းလဲပြသထားသည် , , . ဒါဟာမူးယစ်ဆေးထိတွေ့အောက်ပါတစ်ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ် abstinence ကာလမူးယစ်ဆေးတစ်ခုတိုးလာတဏှာများအတွက်အရေးပါကြောင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့ပြီး, တဏှာ၏ပေါက်ဖွားချေါ . ထိုနည်းတူစွာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါတစ်မိတ်လိုက် abstinence ကာလ psychostimulant ဆုလာဘ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်မှုအတွက်အရေးပါနှင့် NAc အတွက် dendritic အကိုင်းနှင့်ကျောရိုးတိုးလာ . ထို့ကြောင့်ဒီသဘာဝကဆုလာဘ်အကြောင်းမရှိကနေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်နောက်ဆက်တွဲ abstinence ရေရှည် psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင်သူတို့အားဆင်တူသော mesolimbic စနစ်ကိုပြောင်းလဲနှင့်နှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
Psychostimulants တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး abstinence ကာလအပေါ်မှီခိုနေကြအများအပြားရာ၏ NAc အတွက်မြောက်မြားစွာအပိုဆောင်းကိုပြောင်းလဲ, သွေးဆောင်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကိုပြောင်းလဲအချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှုနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည် , ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်း တစ်ဦးကြာမြင့်စွာနေကြပြီးကာလ (3-7 ရက်သတ္တပတ်) ကနောက်တော်သို့လိုက်တစ်ခုတိုးလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် α-အမိုင်နို-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionate (AMPA) အဲဒီ receptor subunits နဲ့ N-methyl-D-aspartate ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်၌ (NMDAအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးပြီးနောက်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသော်လည်း) အဲဒီ receptor subunits, တိုတောင်းသော abstinence ကာလ (1 နေ့က).
GluA2-ချို့တဲ့ AMPARs ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်ကြာရှည် abstinence ကာလ (5-7 ရက်သတ္တပတ်) အပြီးအထိ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သကဲ့သို့ထိုမှတပါး, AMPA နှင့် NMDA receptors ၏ကွဲပြားခြားနားသော subunits differential, မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲ abstinence ကာလကြောင့်ထိခိုက်နေကြ , ။ အဆိုပါ PFC အဆိုပါ NAc ဖို့အဓိက glutamatergic input ကိုထောက်ပံ့  နှင့် electrophysiological လေ့လာမှုများကိုကင်းမူးယစ်ဆေးဝါး abstinence ကာလနှင့် NAc မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအပေါ်မှီခိုဖြစ်မည်အကြောင်း PFC-တုံ့ပြန် NAc shell ကိုအာရုံခံခြင်းနှင့် NAc အာရုံခံ၏အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အပြောင်းအလဲများအတွက် AMPA / NMDA အချိုးမြားတှငျပွောငျးလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်ထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းပြသကြ , , , , , , , ။ ထိုသို့သောမူးယစ်သွေးဆောင်အာရုံကြော plasticity psychostimulant အပြုအမူာင်းပြောင်းလဲမှုများအထောက်အကူပြု , , ,  နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ , , .
ဒါဟာအချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှုနှင့် function ကိုအလားတူအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သည့်သဘာဝဆုလာဘ်ကနေသဘာဝအဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံနှင့်နောက်ဆက်တွဲ abstinence အောက်ပါပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ PFC-တုံ့ပြန် NAc shell ကိုအာရုံခံ၏ Synaptic အစှမျးသတ်တိအတွက် NAc နှင့်ပွောငျးလဲအတွက် AMPA သို့မဟုတ် NMDA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်ဤအစီအမံ3(ကမျှ abstinence ကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ NAc အတွက် plasticity အပေါ်ကိုသဘာဝဆုလာဘ် (1 တပတ်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်ပြီးနောက် 1 လ) တစ်ဦးထံမှ abstinence ကာလ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ 1 မှာကွဲပြားခြားနားသောအဆစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည် နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်ပြီးနောက်နေ့က) ။
စမ်းသပ်မှု 1: လိင်နည်းပြ
စမ်းသပ်မှု 1 ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းအတှေ့အကွုံအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီဘို့အချိန်သင်တန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်ကလိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် 1 ရက်သတ္တပတ်အထိရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ကာလပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားလျှင်, ဒါပေမယ့်သူကယခင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤတွင်, အထီးကြွက်များ၏အုပ်စုနှစ်စုနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါ 1 တပတ်သို့မဟုတ် 1 တစ်လဖြစ်စေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၏ရေရှည်စကားရပ်များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများတောင်ပေါ်မှာမှသိသိသာသာတိုတောင်း latency ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ငါးနေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီပြသ (ပုံ 1A; 1 အပတ်က, p = 0.028; 1 တစ်လ, p = 0.019), intromission (ပုံ 1B; 1 တစ်လ, p = 0.016; 1 သီတင်းပတ်မှာလမ်းကြောင်းသစ်, p = 0.078) နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (ပုံ 1C; 1 အပတ်က, p = 0.016; 1 တစ်လ, p = လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏နေ့ 0.008 နှိုင်းယှဉ်နေ့က5အပေါ် 1) ။ ထို့အပွငျ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် 1 ရက်သတ္တပတ်နှင့် 1 တစ်လနှစ်ဦးစလုံးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရ, မိတ်လိုက် parameters တွေကိုမှ latency မိတ်လိုက်နေ့က 1 နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုနေ့က (1 တပတ်သို့မဟုတ်5လလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနေ့က 1 ပြီးနောက်) (ပေါ်တိုတောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ပုံ 1A: အောင်းနေချိန်, 1 တစ်လ, p mount = 0.016; ပုံ 1B: intromission အောင်းနေချိန်, 1 တစ်လ, p = 0.046; ပုံ 1C: သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်, 1 အပတ်က, p = 0.016; 1 တစ်လ, p = 0.008) နှင့်မျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု5တစ်လမှာတောင်ပေါ်မှာအောင်းနေချိန် မှလွဲ. (မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအပြုအမူ parameter သည်များအတွက်မိတ်လိုက်နေ့က 1 နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့ကိုအကြားတည်ရှိ; p = 0.016) ။ ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီမိတ်လိုက် abstinence တစ် 1 လကာလအတွင်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 2: Ionotropic အချိုမှု receptor Subunit ပြန်လည်ခွဲဝေမှု / Expression
စမ်းသပ်မှု2၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကွဲပြားခြားနားသောမိတ်လိုက် abstinence ကာလအောက်ပါလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက် ionotropic အချိုမှု receptor subunits ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသတျမှတျခဲ့သညျ။ AMPAR နှင့် NMDAR subunit မျက်နှာပြင်နှင့် intracellular ရေကန်တစ်ဦးအမြှေးပါး-impermeant Cross-ချိတ်ဆက်ဓါတ်ကူပစ္စည်း (BS သုံးပြီး quantified ခဲ့ကြသည်3ရွေးချယ် SDS-PAGE နှင့် Western Blot ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးပြုပြင်မွမ်းမံ intracellular ပရိုတိန်းကနေဂုဏ်ထူးဖွင့်မျက်နှာပြင် - ထုတ်ဖော်ပရိုတိန်းပြုပြင်မွမ်းမံသော) ။ မျက်နှာပြင် (High MW,> 250 kDa) နှင့် intracellular bands များကိုကိုယ်စားပြုသောကွက်လပ်များကိုဖော်ပြထားသည် ပုံ 2M.
အဆိုပါ NAc အတွက်အချိုမှု receptor subunit စကားရပ်များနှင့်ဖြန့်ဖြူး။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါတစ်နေ့မှာမျက်နှာပြင်အတွက် NR1 subunit ၏စကားရပ် (S), intracellular (ငါ) နှင့်စုစုပေါင်း (S + I ကို) သိသိသာသာ, (S ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ပုံ 2A, p = 0.025; ငါ ပုံ 2D, p = 0.035; S က + I ကို, ပုံ 2J, p = လိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် 0.023) (ပုံ 2N) ။ နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်အောက်ပါတစ်ခုမှာအပတ်က NR1 (S / ငါအချိုးအစား၏ intracellular အချိုးစကားရပ်မှမျက်နှာပြင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းရှိ၏ ပုံ 2G; p = လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျက်နှာပြင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ် intracellular စကားရပ်မပါဘဲ 0.024) ။ GluA2 ၏ expression သိသိသာသာမျက်နှာပြင်စကားရပ် (ကျနော်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခြင်းမရှိဘဲ, intracellular နှင့်စုစုပေါင်းစကားရပ်ထဲမှာနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်အောက်ပါတစ်ပတ်တိုးမြှင့် ပုံ 2E, p = 0.026; S က + I ကို, ပုံ 2K, p = ရင်တော့မှားမယ်နှိုင်းယှဉ်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် 0.014) (ပုံ 2O) ။ နောက်ဆုံးမိတ်လိုက်အောက်ပါတစ်လ, သွားရမည်အကြောင်း, GluA2 သိသိသာသာ S / ငါအချိုးတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် (ပုံ 2H; p = 0.046) မျက်နှာပြင်စကားရပ် (တစ်ခုတိုးဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့စာရင်းအင်းလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားပုံ 2B; p = ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် 0.055) ။ GluA1 အတွက်အပြောင်းအလဲများနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်အောက်ပါ 1 တစ်ရက်သို့မဟုတ် 1 သီတင်းပတ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါ။ 1 တစ်လပြီးနောက် GluA1 မျက်နှာပြင်နှင့် S / ငါအချိုးစကားရပ်, S ကို (သာစာရင်းအင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဆိုသော်ငြားရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးမြှင့်ခံရဖို့အားထငျရှား ပုံ 2C, p = 0.098; S / ငါ ပုံ 2I, p = 0.083) ။ ဒါကွောငျ့အချုပ်ထဲမှာစပိုင်းတွင် abstinence ၏ 1 နေ့ကမှာ NR1 စုစုပေါင်းတိုးလာစကားရပ်, ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် abstinence ၏2တပတ်အကြာတွင် GluA1 ၏တိုးလာ intracellular စကားရပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့် abstinence ၏2တစ်လအကြာတွင် GluA1 နှင့် GluA1 ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်တိုးမြှင့်ခြင်း (အဆုံးစွန်သောသာ က) စာရင်းအင်းလမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်။
စမ်းသပ်မှု 3: Electrophysiology
စမ်းသပ်မှု3၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းအတှေ့အကွုံ PFC-တုံ့ပြန် NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုပွောငျးလဲရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Synaptic ရေစီးကြောင်းဟာ PFC ထံမှရယူထားခြင်းမှယူဆအမျှင်၏ဆွအောက်ပါလိင်ကြုံတွေ့နှင့်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျား၏ NAc shell ကိုအတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံတှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ AMPA / NMDA အချိုးအစားသိသိသာသာလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့ပါတယ် 1 နေ့က (ကို p = 0.005), 1 ရက်သတ္တပတ် (p = 0.016), နှင့် 1 လ (p = အဆိုပါလိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခုပြီးနောက် 0.005) (ပုံ 3A, B, C) ။ presynaptic transmitter ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, တွဲ-သွေးခုန်နှုန်းအချိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ တွဲ-သွေးခုန်နှုန်းဆွတုံ့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း transmitter ကိုလွှတ်ရာပံ့ပိုးကူညီခြင်း၏ပြင်းအား (ဘယ်အချိန်မဆိုကြားကာလမှာလိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအကြားကွဲပြားဘူးပုံ 3D).
1 နေ့၌လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်အထီးအဘို့အ AMPA / NMDA အချိုး, 1 တပတ်သို့မဟုတ် 1 လနောက်ဆုံးမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ် session တစ်ခုအပြီး။
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအထီးကြွက်များ၏ NAc အတွက် ionotropic အချိုမှု receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ abstinence ကာလ၏အရှည်နှင့်အတူကွဲပြားကြောင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ကြုံတွေ့အထီးကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့တိုးနှင့် intracellular အဲဒီ receptor ရေကန်မှစုစုပေါင်း NR1 subunit စကားရပ်အတွက်ရေတိုရေရှည်တိုးပြသခဲ့သည်။ GluA2 စကားရပ်အသီးသီး 1 ရက်သတ္တပတ်နှင့်ဆုလာဘ် abstinence ၏ 1 တစ်လအကြာတွင် intracellularly နှင့်မျက်နှာပြင်မှာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ GluA1 စကားရပ်သိသိသာသာသည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့အပြင်လိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များချက်ချင်းများနှင့်ကြာရှည်ခံရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PFC-တုံ့ပြန် NAc shell ကိုအာရုံခံကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသော AMPA / NMDA အချိုးလျော့နည်းသွားရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ NAc shell ကိုမှ prefrontal cortical afferents ကဖွဲ့စည်း synapses မှာ Synaptic အစှမျးသတ်တိမြားတှငျပွောငျးလဲမကျင့်သော်လည်းအချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ဦးထံမှ abstinence ကာလ၏အရှည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားအဓိကတွေ့ရှိချက်ရှည်လျားမူးယစ်ဆေး abstinence နှင့် AMPA / NMDA အချိုးတစ်ချက်ချင်းလျော့ကျအပြီးမျက်နှာပြင်စကားရပ်တိုးလာ AMPAR subunit ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအောက်ပါအစီရင်ခံစာများနှင့်ဆင်တူသော်လည်း, ရေတိုရေရှည် NMDAR subunit စကားရပ်ပတ်သတ်ပြီးအတွက်ကွာခြားနှင့် AMPA အတွက်မြဲကျဆင်း / NMDA အချိုးအစား။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလွန်အမင်းကြိုးများနှင့်အားဖြည့်သည်။ ထို့ကြောင့်အထီးကြွက်အကျိုးအမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအဖြစ်တစ်ခုကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, မိတ်လိုက်နှင့် display ကိုသုတ်ရည်လွှတ်စတင်ရန်တိုတောင်း latency ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြထားတဲ့နှင့်တိုးမြှင့်သုတ်ရည်ထိထိရောက်မှုပြသ , ။ ဤတွင်, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဤပံ့ပိုးကူညီမိတ်လိုက်အောက်ပါ 1 သီတင်းပတ်မှာပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့သင်တန်းနည်းပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမိတ်လိုက် abstinence ၏ 1 တစ်လမှတက်ဘို့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကွောငျးဆုံးဖွတျခဲ့သညျ။ အတူတူမိတ်လိုက် abstinence ကာလမှာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိင်အပြုအမူ၏လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီ၏ယာယီပရိုဖိုင်းကိုစိတ်ကြွဆေးများ locomotor-inducing သက်ရောက်မှုမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူကိုက်ညီ ။ ယခင်လေ့လာမှုများ facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ဖျန်ဖြေအဖြစ် NAc ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ NAc core နဲ့ shell ကိုအာရုံခံနှစ်ဦးစလုံးမိတ်လိုက်နေဖြင့် activated သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွေကို-ဆက်စပ်နေကြသည် အဆိုပါ NAc core ကိုတိုးမြှင် dendritic အကိုင်းနှင့်ကျောရိုး၌၎င်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကရလဒ်များနှင့်မိတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ပါတ် shell . ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းမှတဆင့် NAc အတွက်ကူးယူအချက် deltaFosB များ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုး attenuates , ။ T ကhese တွေ့ရှိချက် NAc အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြည့်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများများအတွက်အလားအလာအလွန်အရေးကြီးသည် .
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလိင် abstinence ကာလ၏အရှည်အပေါ်မှီခိုခဲ့ AMPAR ပေါင်းစပ်နှင့် / သို့မဟုတ်လူကုန်ကူးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ GluA2 ထုတ်ဖော် intracellular စကားရပ်တစ်ခုတိုးအလားအလာတိုးလာ GluA1 အဲဒီ receptor ပေါင်းစပ်နှင့် / သို့မဟုတ် endocytosis ညွှန်း,2သီတင်းပတ်မှာထင်ရှားခဲ့သည်။ ထို့နောက် (မျက်နှာပြင်မှာတိုးမြှင့်ဖို့အကြီးအကျယ်ကြောင့်) တစ်ခုတိုးလာ GluA2 မျက်နှာပြင် / intracellular အချိုးဆဲလ်မျက်နှာပြင်မှ receptors ၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအကြံပြုပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက်ပြီးနောက် 1 တစ်လမှာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ကိုကင်းထိတွေ့အောက်ပါ AMPAR လူကုန်ကူးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများလည်းမူးယစ်ဆေး abstinence ကာလ၏အရှည်အပေါ်မှီခိုခဲ့ကြ ။ နောက်ဆုံးကိုကင်းဆေးထိုးပြီးနောက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆဲလ်မျက်နှာပြင်နှင့် synaptosomal GluA1 နှင့် GluA2 /3အဆင့်ဆင့်ကိုကင်းကနေ abstinence ၏တစ်ပါတ်အကြာတွင်တိုးမြှင့်နေကြသည်နှင့်အဖွင့်3မှပတ်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်မှာထိန်းသိမ်းထားကြသည် , , , , ။ မူးယစ်ဆေး abstinence (5 ရက်သတ္တပတ်) ၏တစ်ဦးထက်ပိုကြာရှည်ကာလပြီးနောက် GluA1 မျက်နှာပြင်စကားရပ်မွငျ့မားကျန်ရစ်နှင့် GluA2 မျက်နှာပြင် / intracellular အချိုးအတွက်သေးငယ်တဲ့ကျဆင်းခြင်းရှိ၏နှင့်ဤအရပ်မှ GluA2-ချို့တဲ့ AMPARs upregulated ခဲ့ကြသည် , ။ ဒါဟာမျက်နှာပြင်မှာ GluA2-ချို့တဲ့ receptors ၏စကားရပ်တိုးမြှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ (5-7 ရက်သတ္တပတ်), မဟုတ်ကို non-ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းထံမှအောက်ပါအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ။ ထိုမှတပါး, GluA2-ချို့တဲ့ AMPAR ၏ပိတ်ဆို့မူးယစ်ဆေး-ရှာတားဆီး , . လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် abstinence အောက်ပါ AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုကိုကင်းများကသွေးဆောင်ရှိသူများအနေဖြင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ တိုးမြှင့် GluA1 မျက်နှာပြင်စကားရပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ပစ္စုပ္ပန် data တွေကိုလိင်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက် 1 တစ်လမှာစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိဖို့ရန်ပျက်ကွက်သောအမြှေးပါးမျက်နှာပြင်မှာ GluA1 receptors အတွက်ကျိုးနွံတိုးညွှန်ပြခြင်း, အရှင် GluA1 မျက်နှာပြင်စကားရပ်တက်နောက်ထပ်အဘို့အပိုရှည် abstinence ကာလလိုအပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း abstinence ၏5ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ကင်းသဖြင့်သွေးဆောင်ပြောင်းလဲမှုများဆင်တူ -regulation, ။ ထို့အပြင်လက်ရှိဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် abstinence ၏2တစ်လတိုးမြှင့် GluA5 မျက်နှာပြင်စကားရပ်များတွင်ရလဒ်အနေဖြင့်, ကင်းခြင်းမရှိဘဲ 1 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်သေးငယ်တဲ့ကျဆင်းခြင်းခံယူထားတဲ့ GluA2 ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြား။ ကျနော်တို့ NAc တက်-စည်းမျဉ်း AMPA အဲဒီ receptor နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်တိုးမြှင့်စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့အဝေဖန်စေခြင်းငှါ hypothesize  လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးသည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence ကာလအောက်ပါ။ ဆနျ့ကငျြ, AMPA အဲဒီ receptor စကားရပ်သို့မဟုတ်လူကုန်ကူးမှုမြားတှငျပွောငျးလဲဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ရေတိုရေရှည်သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးပါမရှိကြပေ။ ထောက်ခံမှုများတွင်မြောက်မြားစွာအစီရင်ခံစာများပြောင်းလဲ AMPAR ဂီယာပြန်လည်သုံးသပ် (psychostimulants မှမူးယစ်သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းမလိုအပ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ ) ။ အသိနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive AMPAR upregulation ပြောင်းလဲမှုများမပါဘဲဆုလာဘ် abstinence ၏ 1 တစ်နေ့ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိပြီ , ။ ထိုမှတပါး, အမူအကျင့်ာင်း AMPAR ဂီယာအတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသော psychostimulant စိတ်ကြွဆေးမှအထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူသရုပ်ပြခဲ့ပြီး , , .
NMDARs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပြုအမူထိခိုက်စေအဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုဖို့အများကြီးလျော့နည်းလေ့လာပတ်သတ်ပြီး AMPARs ထက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက Non-ရွေးချယ် NMDAR ရန် (MK-801) ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူ locomotor အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တားဆီး, သို့သော်ဤအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ်ပိတ်ဆို့ဖို့ပျက်ကွက် , ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် NMDAR ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအနည်းဆုံးရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူအာရုံချို့ယွင်းရာ MK-801 ၏စနစ်တကျသို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် medial preoptic ဧရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှတဆင့်လေ့လာခဲ့ပြီး , , ။ NMDAR ရန်မြောကျမောငျးမမြိုးအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားအဖြစ် NMDAR လည်းတခြားသဘာဝဆုလာဘ်ဖျန်ဖြေ  နှင့်ကြွက်များအတွက်အစားအစာတဏှာတိုးမြှင့် ။ အဆိုပါ NAc အတွက် NMDAR စကားရပ်ကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနှင့်ကြာကြာ (3 ရက်သတ္တပတ်) ဒါပေမယ့်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းကနေအတိုမရ (1 နေ့က) abstinence ကာလ NMDAR subunits (NR1, NR2A, NR2B) ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွါး , ။ လက်ရှိရလဒ်တွေကိုအပြင်တစ်ဦး 1 ရက်သတ္တပတ် abstinence ကာလပြီးနောက်မျက်နှာပြင် / intracellular အချိုးလျော့နည်းသွားဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကြောင့်မျက်နှာပြင်နှင့် intracellular အဲဒီ receptor ရေကန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်မှ 1 နေ့၌စုစုပေါင်း NR1 စကားရပ်တစ်ခုတိုးစေသရုပ်ပြပါ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ NMDAR ဂီယာတစ်ခုကနဦးတိုးနောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ရေတိုရေရှည်သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးပါဖြစ်မည်အကြောင်း hypothesize ။
ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါ NR1 subunit အတွက်ရေတိုရေရှည်တိုးလိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်အသံတိတ် synapses ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ Huang က et al  ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအသစ်များကို NMDAR ၏ Post-Synaptic စုဆောင်းမှုသော့ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထားတဲ့အတွက် NAc shell ကို၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses ထုတ်လုပ်ပြီးကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အသံတိတ် glutamatergic synapses AMPAR ကမကထပြုခဲ့ရေစီးကြောင်း၏မရှိခြင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ NMDAR-mediated ရေစီးကြောင်းဖော်ပြ , , ။ ဒါဟာယခင်ကင်းထိတွေ့ခြင်းကဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးတိတ်ဆိတ် synapses generate နိုင်သည်ကိုပြသထားပြီးနှင့်ဤအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ synapses နောက်ဆက်တွဲအတွေ့အကြုံအတွက်တစ်အလွှာပေး , ။ NMDAR တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို NR1 subunits (A-D) နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်အနည်းဆုံးတဦးတည်း NR2 subunit ၏ရေးစပ်နေကြသည်။ NR1 အလုပ်လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းများဖွဲ့စည်းရေးအဘို့လိုအပ်ပါသည်; ဤအရပ်မှ NR1 စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများအလုပ်လုပ်တဲ့ NMDA receptors တွေရဲ့အရေအတွက်အပြောင်းအလဲများတစ်ခုအညွှန်းကိန်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်း NMDARs်NR1 နှင့် NR2B- များ၏သွင်းမောင်းနှင့် NAc shell ကို၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ဤရွေ့ကား NR2B ပါဝင်သောအသံတိတ် synapses ကိုကင်းနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲ locomotor ာင်း attenuated ရာကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း inhibited ခဲ့ကြသည် ။ locomotor ာင်းအချိန်မတန်မီ synapses ဤအမြဲအပြုအမူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် (ဆုလာဘ် abstinence နေဖြင့်အလားအလာ) ပြောင်းလဲနိုင်သစ်ကိုပလပ်စတစ်ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, ဆက်ရှိနေသော်လည်းတိတ်ဆိတ် synapses အရေအတွက်ကင်း abstinence အတော်ကြာရက်အကြာမှာလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ထ-စည်းမျဉ်း NR1 စုစုပေါင်းထုတ်ဖော်မကြာမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့အသံတိတ် synapses အတွက် NMDAR တို့၏စီးပွါးအရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်း hypothesize ။ ထို့အပြင်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် synapses unsilenced များမှာကဲ့သို့လျော့နည်းသွား NR1 မျက်နှာပြင် / intracellular အချိုးအစားနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence ကာလနှင့်အတူ AMPAR subunits အတွက်တိုးနှစ်ဦးစလုံးရှင်းပြ, အသံတိတ် synapses လျော့နည်းသွားသည်။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ဆုချ abstinence ကာလအချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှုမြားတှငျပွောငျးလဲစေသောနှင့်စကားရပ် NAc အတွက် excitatory synapses မှာ Synaptic အစှမျးသတ်တိမြားတှငျပွောငျးလဲအကြံပြုပါတယ်။ Thomas နဲ့လုပ်ဖော်နေဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီးထို့ကြောင့်, တစ်ဦး electrophysiology လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  ထိခိုက်လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမူအကျင့်များနှင့်အချိုမှု receptor ပြန်လည်ခွဲဝေမှုမှုအားပြအတူတူ abstinence ကာလအောက်ပါ NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက်အချိုမှု receptor function ကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်။ ကိုကင်းထိတွေ့အောက်ပါယခင်လေ့လာမှုများဆင်တူ, plasticity PFC input ကိုမှတုံ့ပြန်မှုခဲ့ NAc shell ကို synapses ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ PFC ကောင်းစွာ compulsive အပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှတည်တတ်၏ , ။ PFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ maladaptive ရှာစေအဖြစ်အလားတူ, PFC, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သို့မဟုတ်စကားရပ်ဘို့အရေးကြီးသည် ။ လက်ရှိဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ PFC-တုံ့ပြန် NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက် AMPA / NMDA အချိုးတစ်ချက်ချင်းကြာရှည်ကျဆင်းခြင်းစေပြသခဲ့သည်။
ယခင်ကပြုလုပ်သည့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များအကြားအဓိကကွာခြားချက်ကသဘာဝဆုလာဘ်အောက်ပါ AMPA / NMDA အချိုးပြောင်းလဲမှုများယာယီဖြစ်ကြပြီးမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်ရှိဦးမည်သော်လည်းအချိန်နှင့်အတူငျ့သှားပါလိမျ့မညျကြောင်းကြောင်းတွေးဆခဲ့သည် . ဒါကယူဆချက်ကိုကင်းပေမယ့်မပေးအစားအစာသို့မဟုတ် sucrose အဆိုပါ VT အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့တိုး AMPA / NMDA အချိုးသွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်A . ဆနျ့ကငျြ, လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုအမှန်တကယ် NAc အတွက် AMPA / NMDA အချိုးတစ်ကြာရှည်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါကြောင်းပြသသည်။
သို့သော်လိင်-သွေးဆောင် NAc shell ကို plasticity AMPAR ကမကထပြုခဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ဦး bidirectional ပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြခဲ့ကြသောအရာသည်အောက်ပါကင်းထိတွေ့မှုကနေမတူ။ ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး abstinence ၏တနေ့, AMPA / NMDA အချိုးတစ်လျှော့ချရေးတွင်အောက်ပါ  နှင့်ပစ်ခတ်ရန်စွမ်းရည်အတွက်စိတ်ကျရောဂါ  , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ရေတိုရေရှည်သက်ရောက်မှုများအတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်ဆင်တူရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးကိုကင်းကနေ 14 ရက်ပေါင်း abstinence ကာလပြီးနောက်, NAc shell ကိုအာရုံခံအဆိုပါ NAc အတွက်ကင်းတိုးမြှင် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုမှ abstinence အကြံပြုခြင်း, AMPA / NMDA အချိုးတိုးလာကြပါပြီ ။ H ကိုence, မကြာမီမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့ပြီးနောက်လျှော့ AMPA-mediated တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ Synaptic plasticity အတွက် bidirectional ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကင်းထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုပေမယ့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေး abstinence နှင့်အတူ AMPAR-mediated စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆက်စပ် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆုလာဘ်၏ာင်းသူတို့အား abstinence ကာလအတွင်းမှာလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်သော်လည်း, NAc shell ကိုအတွက်လျော့နည်းသွား AMPAR-mediated စိတ်လှုပ်ရှားမှု . သို့သော်အခြားအစီရင်ခံစာများကိုကင်းထိတွေ့မှုကအောက်ပါအတိုများနှင့်ကြာမြင့်စွာနေကြပြီးကာလမှာ core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လျော့နည်းသွားအခ်ါအမြှေးပါးစိတ်လှုပ်ရှားပြခဲ့ကြ , , , , , , , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုဆင်တူ bidirectional ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်း, ဖေါ်ပြခြင်း။ ထို့အပြင်လက်ရှိရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံတွဲသွေးခုန်နှုန်းအချိုးအဘို့အအုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များမရှိခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး presynaptic အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးပြသပါ။ Kalivas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိုကဲ့သို့သောပွောငျးလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိအဆိုပါ NAc အတွက် extracellular Non-Synaptic အချိုမှုရေကန်၏ပြုပြီအတွက်အပြောင်းအလဲ induces ကြောင်းသရုပ်ပြကြပြန်လည်သုံးသပ် (ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ဆက်လက်တည်ရှိ ).
သည်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများအနေဖြင့် NAc မှ glutamatergic သွင်းအားစုအတွက် PFC နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍထက်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်. Tသူ NAc အဆိုပါ basolateral amygdala (BLA) နှင့် hippocampus ၏ ventral subiculum ထံမှ glutamatergic input ကိုလက်ခံရရှိ ။ အဆိုပါ BLA သဘာဝကဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍ , , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှင့်အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အသင်းအဖွဲ့များအတွက်အရေးကြီးသည်  နှင့်ဆာပအပြုအမူများအတွက်မိတ်လိုက်စတင်ရန် ။ ထို့ကြောင့်, ကအဖြစ်ကောင်းစွာ BLA-တုံ့ပြန် synapses မှာ Synaptic ခွန်အား၌ကြောင့်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲမှနျးဖို့သွေးဆောင်သည်။
အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက် PFC synapses မှာလျော့နည်းသွား AMPA / NMDA အချိုးမကြာမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံပြီးနောက် NR1 ၏တိုးလာစကားရပ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence ကာလပြီးနောက်တိုးမြှင့် GluA2 နှင့် GluA1 နှင့်အတူကိုက်ညီမှု။ တဦးတည်းရှင်းပြချက်အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုအတွက် PFC မှတပါးအခြားအဦးနှောက်ဧရိယာများမှပေါ်ပေါက် glutamatergic input ကိုလက်ခံရရှိ synapses မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါ့အပြင်ပရိုတိန်းနမူနာအတွက် NAc shell ကိုအပြင် NAc core ကို၏ပါဝင်မှုသည်, ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုဒေတာများအကြားတိကျသောဆက်စပ်မှုလုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ရှင်းလင်းစွာသဘာဝကဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင်ရှိသူများအနေဖြင့်တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူ NAc အတွက် Synaptic plasticity ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
Iamphetami ၏ locomotor inducing သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုဆင်တူဎနိဂုံးချုပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အထီးကြွက်များတွင်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ချက်ချင်းကြာရှည်ပံ့ပိုးကူညီစေပြခဲ့ပါတယ်,ne နှင့် NAc shell ကိုအတွက် synapses အတွက် AMPA / NMDA အချိုးတစ်ချက်ချင်းကြာရှည်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ NMDAR တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း upregulation စေသောနှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်း NAc အာရုံခံ၏မျက်နှာပြင်မှ AMPAR ၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ထို့ကွောငျ့အ psychostimulants များ၏သက်ရောက်မှုများ, သဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူအလားတူအချိုမှု receptor စကားရပ်, လူကုန်ကူးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence သောအောက်ပါကင်းနဲ့မတူပဲ, အ NAc shell ကိုအတွက် AMPA / NMDA အချိုးအတွက် Persistent ကျဆင်းခြင်းခဲ့သည်။ ဒီကွာဟမှုများအတွက်အလားအလာအခြေခံပံ့ပိုးအချက်များအဘို့အ testable ယူဆချက်တစ်ဦးကအရေအတွက်အားဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုအောက်ပါ, BLA-တုံ့ပြန် synapses ၏ပွောငျးလဲအပါအဝင်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုတစ်ဖန်သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ထိတွေ့မှု၏ရေရှည်အကျိုးဆက်များအကြားနှစ်ဦးစလုံးတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဒီသဘာဝကဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြုမူပုံကိုတစ်ဦးပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (စမ်းသပ်မှု 1 နှင့် 2: 10-12 ရက်သတ္တပတ်; စမ်းသပ်ချက် 3, 8-10 ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ချက်များစတင်ခြင်းအချိန်မှာ) ချားလ်စ်မြစ်ဓာတ်ခွဲခန်း (Senneville, QC, ကနေဒါ) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ လိင်တူချင်းတိရိစ္ဆာန်များအစားအစာနှင့်မရရှိနိုင်ပါရေနှင့်အတူတစ်ဦး 12 / 12 နာရီအလင်းမှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားအပူချိန်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြွန်နှင့်အတူ Plexiglas လှောင်အိမ်ထဲမှာ pair တစုံ-သျောခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း မှလွဲ. ။ မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများဘို့နှိုးဆွအမျိုးသမီး (210-220 ဂရမ်) နှစ်နိုင်ငံ ovariectomy အောက်ပါ 5% estradiol benzoate နဲ့ 95% လက်စထရောင်တစ်ဦးအရေပြားအောက်ဆုံး implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 500 နာရီစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 0.1 mL နှမ်းဆီ4μgအဓိကချို့ယွင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။
အားလုံးအထီးကြွက်မတိုင်မီစမ်းသပ်ချက်စတင်ခြင်းမှလိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့ကြသည်။ မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမှိန်အနီရောင် illumination အောက်မှာ (အမှောင်ထဲမှာကာလ၏စတင်ခြင်းပြီးနောက် 2-6 နာရီကြား) အစောပိုင်းမှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session တစ်ခုစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်သုတ်ရည်လွှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် 1 အခြိနျတိုငျအောငျ copulate ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် parameters တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်အပါအဝင်: (ML; အမျိုးသမီး၏နိဒါန်းအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးတောင်ပေါ်မှာသည်အထိအချိန်) အောင်းနေချိန် mount, intromission အောင်းနေချိန် (IL; အချိန်နိဒါန်းကနေ အမျိုးသမီး၏ပထမဦးဆုံးသည်အထိ) အင်္ဂါဇာတ်ထိုးဖောက်မှုနှင့်အတူ mount နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (EL; ပထမဦးဆုံး intromission ကနေသုတ်ရည်လွှတ်မှအချိန်) ။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှု, ကိုင်တွယ်မိတ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့တူညီသောခန်း၌ကျိန်းဝပ်နှင့်အရှင်ဆူညံသံ, ယေဘုယျနှောင့်အယှက်များနှင့် estrous အမျိုးသမီး၏ဝေးလံသောအနံ့၏တူညီသောအဆင့်ဆင့်ထိတွေ့ပေမယ့်အပြန်အလှန်သို့မဟုတ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ခွင့်မပြုကြ၏။
Sprague Dawley အထီးကြွက်5ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအဘို့မိမိတို့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated ။ တိရစ္ဆာန်များ2စမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်များနှင့်ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session တစ်ခု (စမ်းသပ်ခြင်းနေ့ပြီးနောက်အောက်ပါ 1 တပတ်သို့မဟုတ် 1 တစ်လဖြစ်စေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဎ = အုပ်စုတစ်စုနှုန်း 7) ။ အုပ်စုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ parameters တွေကိုအပေါ်လိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရရှိမှုအနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုမဆိုမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုင်းတာဘို့အုပ်စုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အုပ်စုတစ်စုနှိုင်းယှဉ်အတွင်းမှာပဲနေ့ 1 နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့ကိုအကြားနှင့်နေ့5နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့က (1 တပတ်သို့မဟုတ်နေ့5ပြီးနောက် 1 တစ်လဖြစ်စေ) အကြားတောင်ပေါ်မှာအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးကူညီဆုံးဖြတ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနေ့ 1 နှင့်5အကဲဖြတ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် , Wilcoxin သုံးပြီး intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် latency 5% ၏အရေးပါမှုကို Level ဖြင့်အဆင့်စမ်းသပ်မှုလက်မှတ်ထိုး။
ionotropic အဲဒီ receptor ပြန်လည်ခွဲဝေမှုဆနျးစစျဖို့, 1 စမ်းသပ်ဆင်တူတဲ့ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်။ လိင်နုံအထီး Sprague Dawley ကြွက်လိင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရင်တော့မှားမယ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့) ကလိင်ကြုံတွေ့အုပ်စုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ5ဆက်တိုက်နေ့စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများမှတဆင့်ရရှိခဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်ကြုံတွေ့အထီးထို့နောက်ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါတစ်ရှူးစုဆောင်းခြင်း, ဖြစ်စေ3နေ့, 1 အပတ်က, ဒါမှမဟုတ် 1 တစ်လ 1 စမ်းသပ်အုပ်စုများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ parameters တွေကိုအဘို့အလိုက်ဖက်) သို့ခှဲဝေခဲ့ကြသည်။ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကိုင်တွယ်) လိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုကနေဦးနှောက်နောက်ဆုံးကိုင်တွယ်ပြီးနောက်တူညီအချိန်အချက်များမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအုပ်စုများပါဝင်သည်: လိင်တွေ့ကြုံ (AMPAR: 1D, ဎ = 9; 1W, ဎ = 12; 1M, ဎ = 12; NMDAR: 1D, ဎ = 9, 1W သို့မဟုတ် 1M, ဎ = 6) သို့မဟုတ်လိင်ရင်တော့မှားမယ် (AMPAR: 1D, ဎ = 9; 1W, ဎ = 12; 1M, ဎ = 12; NMDAR: 1D, ဎ = 9, 1W သို့မဟုတ် 1M, ဎ = 6) ။
receptor လက်ဝါးကပ်တိုင်-Link Surface
တိရိစ္ဆာန်များကိုဆိုဒီယမ် pentobarbital (၂၇၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်; ip) ဖြင့် euthanized ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ decapitation ပြီးနောက် ဦး နှောက်တစ်ခုစီကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပြီးရေခဲရေခဲဆားငံထဲကိုချက်ချင်းပို့လိုက်တယ်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် NAc ကို Paxinos & Watson (270) မှသတ်မှတ်ထားသော NAc နယ်နိမိတ်အရကြွက် ဦး နှောက် matrix (ASI Instruments, Warren, MI, USA) နှင့် scalpel blade ကို အသုံးပြု၍ ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ Mcclwain တစ်ရှူးကြက်ညှာ (Vibratome, St. Louis, MO, USA) ကိုအသုံးပြုပြီး NAc တစ်သျှူးများကို 1998 × 400 µm Cube များထဲသို့ထည့်သည်။ AMPA နှင့် NMDA receptor subunit Cross-link များအတွက်နည်းစနစ်သည် Boudreau & Wolf ကိုအခြေခံသည် ။ ထိုခဏခြင်းတွင်အောက်ပါခုတ်, ဦးနှောက်တစ်သျှူးလျှင်မြန်စွာရေခဲ-အအေး aCSF ပရိုတိန်း Cross-ချိတ်ဆက်ဓါတ်ကူပစ္စည်း bis (sulfosuccinimidyl) နဲ့ suberate (BS ရောနှော၏ 1 mL င်တစ်ဦး Eppendorf ပြွန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်3,2MM; ပီယပ်ဇီဝနည်းပညာ, Rockf သို့မဟုတ် d, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့် 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ rocker အပေါ်4မိနစ်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး။ BS3 intracellular ပရိုတိန်းပြုပြင်မထားတဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေစဉ်တွင်, အရှင်, မြင့်သောမော်လီကျူးအလေးချိန်စုစုပေါငျးမြားဖွဲ့စည်း, ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူရွေးချယ် Cross-link ကိုမျက်နှာပြင်-ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပရိုတိန်းကဖွင့်မဟုတျဘဲလက်ဝါးကပ်တိုင်ဆဲလ်အမြှေးပါးပါဘူး။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုမျက်နှာပြင်ဖွများနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်၏ intracellular ရေကန်ဆိုဒီယမ် dodecyl sulfate-polyacrylamide ဂျယ် electrophoresis (SDS-စာမကျြနှာ) နှင့်အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးမဂ္ဂါဝပ်အပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားခံရဖို့။ အဆိုပါ Cross-ချိတ်ဆက်တုံ့ပြန်မှု 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 1 မိဘို့ 10 M က glycine ၏4μLများ၏များအပြင်အားဖြင့်မီးမငြိမ်းခဲ့သည်။ တစ်ရှူး 14 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 000 မိနစ်24 rpm မှာ centrifugal အားဖြင့် pelleted နှင့် supernatant စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလုံးလေးများရေခဲ-အအေး lysis ကြားခံ၏ 400 μL [25 MM Hepes (pH ကို 7.4), 500 MM NaCl,2MM EDTA, 1 MM DTT, 1 MM PMSF, 20 MM နတ်, 0.1% Nonidet, P-40 (0.1 အတွက် resuspended ခဲ့ကြသည် %), phosphatase inhibitor ကော့တေး (Phosstop, Roche ရှာဖွေရေး GmbH,)] × protease inhibitor ကော့တေး (Ministop, Roche ရှာဖွေရေး GmbH, Mannheim, ဂျာမနီ) နှင့် 1 ။ နမူနာထို့နောက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 14 မိဘို့ 0002rpm မှာ centrifuged နှင့်ချက်ချင်းပြန်ရေခဲပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့ထားရှိ, တစ်ရှူးနှောင့်အယှက်မှ4စက္ကန့် sonicated ခဲ့ကြသည်။ Supernatant နမူနာ၏ 30 μLရေခဲပေါ်တွင်တင်ခဲ့ကြသည်နှင့်ကျန်ရှိသော supernatant အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့သည့်အနေဖြင့်သစ်တစ်ခု Eppendorf ပြွန်, ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာအဘို့အ Cross-နှင့်ဆက်စပ် lysates ၏ပရိုတိန်းအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခု BCA assay (ThermoFisher သိပ္ပံ Inc ကို, Waltham, MA) နှင့် NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer (ThermoFisher သိပ္ပံ Inc ကို, Waltham, MA) ကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ပရိုတိန်းနမူနာ (20 μg) တစ်ဦး Mini ကို Trans-ချေဆဲလ်စနစ် (Bio-Rad Laboratories, Ltd. ) ကို အသုံးပြု. 4-15% gradient ကို Tris-HCl gels (Bio-Rad Laboratories, Ltd. , Mississauga, အွန်, ကနေဒါ) ရက်နေ့တွင် loaded နှင့် electrophoresed ခဲ့ကြသည် နှင့် Tris-Glycine-SDS ကြားခံ [25 mM Tris, 192 mM Glycine, 0.1% SDS (pH8.3)] အပြေး။ Precision Plus အားပရိုတိန်းအားလုံးအပြာရောင်စံချိန်စံညွှန်းများ (Bio-Rad Laboratories, Ltd. ) မော်လီကျူးအလေးချိန်အမှတ်အသားများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ immunoblotting များအတွက် Trans-ချေဆဲလ်စိုစွတ်သောချေစနစ် (Bio-Rad Laboratories, Ltd. ) ကို အသုံးပြု. ; ခွဲခြာပြီးနောက်ပရိုတိန်း Millipore Immobilon-FL polyvinylidene difluoride အမြှေးပါး (Millipore, Billerica MA, USA သို့ PVDF) အားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါပရိုတိန်းလွှဲပြောင်းအားလုံးနမူနာ run ခဲ့ကြသည်လွှဲပြောင်းကြားခံ (အခန်းအပူချိန် (RT ကို) မှာ 20 နာရီများအတွက် 0.037% Methanol နှင့် 25 V ကိုမှာ Tris-Glycine အတွက် 192% SDS [8.3 MM Tris, 82 MM Glycine (pH ကို 1)] ။ အတွက် run ခဲ့သည် အနည်းဆုံးအားပွားအတွက်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ gels ဖြတ်ပြီးပါဝင်တယ်။
ထို့နောက်အမြှေးပါးတစ်2နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် RT ကိုမှာ shaker ဗန်းအပေါ်3နာရီသည် ဖြစ်. , Odyssey Buffer (Li-ကော Biosciences, လင်ကွန်း, NE) နှင့် Tris-Buffer ဆား (50 MM Tris နှင့် 150 MM NaCl (pH8.0) TBS) Blocking ၏ 1 ဖြေရှင်းချက်။ 16; အမြှေးပါးပြီးတော့တစ်ဦးချင်းယုန် polyclonal Anti-GluA4 (~1 KDA ဖြစ်စေနှင့်အတူ 106 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ shaker အပေါ် 1 နာရီများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် 1K; Millipore, ကြောင် # AB1504) နှင့် GluA2 (~100 KDA; 1 4K; Millipore, ကြောင် # AB1768), သို့မဟုတ် mouse ကို monoclonal Anti-NR1 (~130 KDA; 1 2K; အထက်ပိုင်း (Millipore), ကြောင် # 05-432) ။ ဤရွေ့ကားမူလတန်းပဋိယခင်ကအသုံးပြုအတည်ပြုပြီ , နှင့်မဟုတ်တဲ့ Cross-နှင့်ဆက်စပ်တစ်ရှူးပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့်အခါ peptide အတူ antibody ကို၏ preabsorption နေဖြင့်တားဆီးခဲ့သင့်လျော်သောမော်လီကျူးအလေးချိန်မှာတစ်ခုတည်းတီးဝိုင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးပဋိတစ်2အတွက်ရောခဲ့ကြသည် TBS-T ကသုံး 3-မိလျင်ကနောက်တွင်ထိုအမြှေးပါးတစ် 0.05 အတွက်ရောအလယ်တန်းပဋိနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ TBS-T က (TBS + 20% Tween-8.0 (pH10) နဲ့ Buffer Blocking Odyssey ၏2ရောနှော RT ကိုမှာ3နာရီများအတွက် Buffer နှင့် TBS-T က Blocking Odyssey ၏ 1 ရောနှော။ အဆိုပါအလယ်တန်းပဋိ Alexa-680 conjugation ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် (1 ပါဝင်သည် 5K; Invitrogen, Carlsbad,, CA, USA) သို့မဟုတ်မှာ IR Dye800 CW-conjugation ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင် mouse ကို (1 10K; Li-ကော Biosciences) ။ ချောင်း immunoreactivity တစ်ခု Odyssey 2.1 စကင်နာ (Li-ကော Biosciences) ကို အသုံးပြု. မြင်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများကိုဖမ်းယူခဲ့သည်။
ပရိုတိန်းနမူနာတိုင်းအတွက်တီးဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြင်းအားပြင်းအားအဆင့် (မြင့်မားသောမဂ္ဂါဝပ်၊ မျက်နှာပြင်ဖော်ပြမှုအတွက်> 250 kDa နှင့် intracellular expression အတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော MW တွင်တပ်သားများ) ကို Odyssey software ကို အသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပျမ်းမျှတွက်ချက်သည်။ မျက်နှာပြင် (S)၊ အတွင်းပိုင်းဆဲလ် (I)၊ အချိုး (S / I, receptor subunit distribution ၏အတိုင်းအတာ) နှင့်စုစုပေါင်း (S + I, စုစုပေါင်း receptor subunit expression ၏အတိုင်းအတာ) တီးဝိုင်းသိပ်သည်းဆတန်ဖိုးများကိုသက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြေရှာမှု၏ယုတ်တန်ဖိုးများကိုပုံမှန်စံသတ်မှတ်ထားသည်။ အုပ်စုများ။ နမူနာတစ်ခုချင်းစီ၏ပုံတူပွားခြင်း (ကွဲပြားခြားနားသောဂျယ်လ်များဖြင့်တင်ဆောင်ခြင်း) အကြားပရိုတိန်းနမူနာများ၏တင်ပို့မှုတွင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုမရှိခြင်းကိုအတည်ပြုသောအကြားပြင်းအားကွာခြားမှုမရှိပေ။ Western Blot ဒေတာအားလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်မှုနိုးကြားမှုထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ချိန်တည်းတွင်ထူးခြားမှုအဆင့် ၀.၅၅ နှင့်မရောနှောထားသော t-tests ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2များအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တူညီသောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လိင်ကြုံတွေ့အထီးနောက်ဆုံးမိတ်လိုက် session တစ်ခု (3 နေ့, ဎအောက်ပါ, 1 စမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြားလိင်အပြုအမူစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ကိုက်ညီနှင့်တစ်သျှူးအစုအဝေး 1 တစ်နေ့တာ၏အချိန်ပေါ်အခြေခံပြီး, 1 တပတ်သို့မဟုတ် 1 တစ်လခဲ့ကြသည် = 7; 1 အပတ်ကဎ = 9; 1 လဎ = 10) ။ ဤအအငယ်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အတွက်အဟောင်းတွေအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေကွဲပြားကြဘူး။ transcardial perfusion အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရေခဲ-အအေး oxygenated နှင့်အတူ (270% အို; ကြွက်ဆိုဒီယမ် pentobarbital (ip 95 ကီလိုဂရမ် / mg) နဲ့ anaesthesized ခဲ့ကြသည်2, 5% CO2[250 MM Sucrose, 2.5 MM KCl, 1.25 MM nah ်) ပြင်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်2PO4,4MM MgCl2, 0.1 MM CaCl2, 26 MM NaHCO3, 10 MM ဂလူးကို့စ,3MM myoinositol,2MM ဆိုဒီယမ် pyruvate နှင့် 0.5 MM ascorbat] ။ ဦးနှောက်ကိုရေခဲ-အအေးအောက်ဆိဂျင်ပြင်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ excised နှင့်နေရာချပေးခဲ့သည်။ 400 μmထူ Sagittal ဦးနှောက်အချပ်, တစ်ဦး vibratome (Microm, Walldorf, ဂျာမနီ) ကို အသုံးပြု. တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်နှုန်း4ချပ်စုစုပေါင်းအတု cerebrospinal fluid (aCSF) [125 MM NaCl, 2.5 MM KCl, 1.25 MM nah အတူကျင်းပနိုင်ရန်အခန်းထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်2PO4, 1.3 MM MgCl2, 2.5 MM CaCl2, 26.2 MM NaHCO3 ထို့နောက်နှင့် 10 MM 32 မိဘို့ 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအပူဂလူးကို့စ] နှင့်တစ်ခုတည်းအချပ်တစ်မှတ်တမ်းတင်အခန်းနေရာချမီမှာအနည်းဆုံး 1 နာရီများအတွက်အခန်းအပူချိန်မှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤအခန်း 22 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအောက်ဆိဂျင် aCSF နှင့်အတူ superfused ခဲ့သည်။ မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့် parameters တွေကိုအဘို့အအုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်နောက်ဆုံးကိုင်တွယ်ခြင်း (ဎပြီးနောက်3အချိန်မှတ်၏တစ်ဦးချင်းစီမှာလိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုကနေစုဆောင်းခဲ့ကြ = 3-4 တစ်ခုချင်းစီ) ။
Shell ကအာရုံခံ dorsal striatum ဆံ့မ medial NAc ချပ်ထဲမှာလေ့လာခဲ့ကြသည် ။ သံမဏိစိတ်ကြွ microelectrodes rostrally cortical afferent အမျှင်၏ presynaptic ဆွများအတွက်မှတ်တမ်းတင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းရန် prelimbic Cortex-NAc နယ်စပ်၌ထားကြ၏။ အရေးပါသောအအလတ်စား spiny အာရုံခံအမြင်အာရုံဟာသူတို့ရဲ့ (30-35 μ M ကအချင်းလှည့်ပတ်) Soma အရွယ်အစားနှင့် MV -75 မှ -85 fo တစ်အတော်လေးအပျက်သဘောကျိန်းဝပ်မြှေးပါးအလားအလာများကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အသံသွင်းတဲ့ 200 kHz Low-pass filter ကိုအတူတစ် Axopatch 20A အသံချဲ့စက်နှင့် 1340 KHz (Digidata 10) ၏နမူနာနှုန်းကိုသုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။ PClamp 9.0 စမ်းသပ်မှု protocols များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Afferents တစ်စိတ်ကြွအာရုံစူးစိုက်မှုအဖြိုက်နက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသုံးပြီး 50 Hz နဲ့အာရုံခံမှာတွဲပဲမျိုးစုံ (0.1 ms ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI) နဲ့နှိုးဆွပေးခဲ့ကြသည်။ ဆဲလ် NMDA ရေစီးကြောင်း၏မဂ္ဂနီဆီယမ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှသက်သာရာရစေရန်အလို့ငှာ, -80 MV မှာဗို့အား-Clamp ရှိ. , Synaptic ဆွမတိုင်မီ 40 ms များအတွက် + 500 MV မှ depolarized ။ (; AP40 ၏ရှေ့တော်၌ထိန်းချုပ်မှု×တပြင်လုံးကိုဆဲလ်ရေစီးကြောင်း5နှင့် 50 × 30 μM) AMPA / NMDA အချိုးဟာ NMDAR ရန် AP30 ၏မရှိခြင်းသို့မဟုတ်မျက်မှောက်၌ +5MV မှာ EPSCs ၏ပျမ်းမျှယူကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ NMDA တုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုကနေ AP5 အသံသွင်းနုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ AMPAR EPSC ၏အထွတ်အထိပ်တခု AMPA / NMDA အချိုးလိုက်လျောဖို့ NMDAR EPSC ၏အထွတ်အထိပ် ချ. ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ တွဲသွေးခုန်နှုန်းအချိုးဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, တိုင်းတာ presynaptic ဆွ (80 ×) နဲ့ -30 MV မှာယူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလိင်ရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုကနေဒေတာများ (ဎတဦးတည်းကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုဖွဲ့စည်းရန်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည် = 10 တိရိစ္ဆာန်များအတွက် 10 အာရုံခံ) မျှစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုထိန်းချုပ်မှုအတွင်းအချိန်မှတ်အကြားတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ကတည်းက။ လိင်အတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများ (1 နေ့, ဎ = 7; 1 အပတ်ကဎ = 9; 1 လဎ = 10 အာရုံခံ; အချိန်ကြားကာလ) အတွက်တစ်ဦး Fisher က LSD အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်: ပုံမှန်အားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အနှုန်းတဦးတည်းအာရုံခံဆဲလျ) ANOVA (အချက်များတစ်လမ်းကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc 5% ၏အရေးပါမှုကို Level ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်။
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းအကြံဉာဏ်ဒေါက်တာ Marina အီး Wolf ကနှင့်သူ Mike Milovanovic ဆေးပညာ Rosalind Franklin တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: LMC နှင့် KKP မှ LMC နှင့်က ARD မှကနျြးမာရေးသုတေသနနှင့်သဘာဝသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကောင်စီကနေဒါ Institutes ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1. Morgan PJ, Galler JR, Mokler DJ သမား။ စနစ်များနှင့် limbic forebrain / limbic midbrain ၏ကွန်ရက်တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ prog Neurobiol ။ 2005;75: 143-160 ။ [PubMed]
2. Avena မိုင်, Bocarsly ME, Rada P ကိုကင်မ်တစ်ဦးက, Hoebel BG ။ နေ့စဉ်တစ်ဦး sucrose ဖြေရှင်းချက်အပေါ် bingeing ပြီးနောက်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့စိုးရိမ်စိတ် induces နှင့် dopamine / acetylcholine မညီမမျှ accumbens ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2008;94: 309-315 ။ [PubMed]
3. Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားနဲ့အဆီ Bing စွဲလမ်းကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကွာခြားမှုရှိသည်။ J ကို Nutr ။ 2009;139: 623-628 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. Avena မိုင်။ Bing စား: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် neurochemical ထိုးထွင်းသိမြင်။ disorders စားပါ။ 2009;17: 89-92 ။ [PubMed]
5. Vucetic Z ကို, Reyes TM အလိုအလျောက်။ ဗဟို dopaminergic circuitry အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ်: အဝလွန်၏စည်းမျဉ်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Wiley Interdiscip ဗြာ Syst Biol Med ။ 2010;2: 577-593 ။ [PubMed]
6. Yoshida M က, Yokoo H ကို, et al Mizoguchi K ကို Kawahara H ကို, Tsuda တစ်ဦး။ အတွက် Vivo microdialysis အားဖြင့်တိုင်းတာခြင်း: စားသောက်အကြောင်းရင်းမှာနျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ neuroscience လက်တ။ 1992;139: 73-76 ။ [PubMed]
7. Numan အမ်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များနှင့်ကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူများ၏အာရုံကြော circuitry ။ dev Psychobiol ။ 2007;49: 12-21 ။ [PubMed]
8. လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich B, Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2001;40: 133-138 ။ [PubMed]
9. လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ် neuroscience ။ 2004;7: 1048-1054 ။ [PubMed]
10 ။ Frohmader KS, အိုး KK, Balfour ME, Coolen LM ။ အပျော်အပါးရောစပ်: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လိင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2010;58: 149-162 ။ [PubMed]
11 ။ အိုး KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand မိုင်, ယု L ကို, et al ။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 872-879 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S က, et al ။ နျူကလီးယပ်အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Bradley KC, Boulware ကို MB, Jiang H ကို, Doerge RW, Meisel RL, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွင်းဗီဇစကားရပ်များတွင်အပြောင်းအလဲများ။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2005;4: 31-44 ။ [PubMed]
14 ။ Bradley KC, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက c-Fos ၏လိင်အမူအကျင့်သော induction အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် sensitized နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 2123-2130 ။ [PubMed]
15 ။ Tenk CM, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2009;55: 93-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Agmo တစ်ဦးကယင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့် Berenfeld R. : opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1990;104: 177-182 ။ [PubMed]
17 ။ Agmo တစ်ဦးက, ဂိုမက်ဇအမ်လိင်အားဖြည့်သည့် medial preoptic ဧရိယာသို့ naloxone ၏ပြုတ်ရည်များကပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1993;107: 812-818 ။ [PubMed]
18 ။ မပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Kagan ကပြောပါတယ်ဂျေ Differential ဆုလာဘ်တန်ဖိုး။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1955;48: 59-64 ။ [PubMed]
19 ။ လိုပက်ဇ်နာရီ, Ettenberg အေလိင်အေးစက်မက်လုံးပေး: dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းစဉ်အတွင်းစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများကို attenuation ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002;72: 65-72 ။ [PubMed]
20 ။ ရှက်ဖီး FD, Wulff JJ, ကျောထောက်နောက်ခံ R. လိင် drive ကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲသုတ်ရည်ထိဆုကြေးတန်ဖိုး။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1951;44: 3-8 ။ [PubMed]
21 ။ Everitt BJ, ဖွာ P ကို, Kostarczyk အီးတေလာက S, အထီးကြွက် (Rattus norvegicus) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပအပြုအမူများ Stacey P. လေ့လာရေး: တစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲအကျဉ်းအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဗြဲထိန်းချုပ်ရေး။ J ကို comp Psychol ။ 1987;101: 395-406 ။ [PubMed]
22 ။ Everitt BJ, အထီးကြွက် (Rattus norvegicus) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပအပြုအမူများ Stacey P. လေ့လာရေး: II ကို။ preoptic ဧရိယာကိုတွေ့ရှိရပါသည်, သင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ J ကို comp Psychol ။ 1987;101: 407-419 ။ [PubMed]
23 ။ အိုး KK, Frohmader KS, Vialou V ကို, Mouzon အီး, Nestler EJ, et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2010;9: 831-840 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Dietz DM, Dietz KC, Nestler EJ, Russo SJ ။ psychostimulant-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Pharmacopsychiatry ။ 2009;42(ပျော့ပျောင်း 1): S69-78 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003;6: 1208-1215 ။ [PubMed]
27 ။ Frohmader KS, Lehman MN, Laviolette SR, Coolen LM ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတစ်ပြိုင်တည်းထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 16473-16482 ။ [PubMed]
28 ။ Grimm JW, မျှော်လင့်ခြင်း BT, ပညာရှိ RA, Shaham Y. Neuroadaptation ။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ။ 2001;412: 141-142 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ သောမတ်စ် MJ, Kalivas PW, Shaham Y. Neuroplasticity အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲပါ။ br J ကို Pharmacol ။ 2008;154: 327-342 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ ME Wolf ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations ၏ဘာမြူဒါတြိဂံ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010;33: 391-398 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Conrad KL, Tseng KY, Uejima JL, Reimers JM, Heng LJ, et al ။ accumbens GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား mediates ။ သဘာဝ။ 2008;454: 118-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ McCutcheon je, ဝမ်က X, Tseng KY, Wolf က ME, Marinelli အမ်ကယ်လ်ဆီယမ်-permeable AMPA receptors နျူကလိယရှိကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် synapses accumbens ပေမယ်ကင်းအုပ်ချုပ်ခွင့် experimenter မဟုတ်ပါဘူး။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 5737-5743 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ McGeorge AJ, Faull RL ။ ကြွက်များတွင် striatum ဖို့နှောက် cortex ကနေစီမံကိန်း၏အဖွဲ့အစည်းက။ neuroscience ။ 1989;29: 503-537 ။ [PubMed]
34 ။ Kourrich S ကိုသောမတ်စ် MJ ။ အလားတူအာရုံခံ, ဆန့်ကျင်ဘက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်: shell ကိုနှိုင်းယှဉ် accumbens core ကိုအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများပစ်ခတ် psychostimulant အတွေ့အကြုံကို differential ပြောင်းပြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 12275-12283 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ et al Ishikawa က M, Mu P ကို, Moyer JT, Wolf ကဂျာ Quock RM ။ နျူကလိယအတွက် Homeostatic synapses-မောင်းနှင်မြှေးပါး plasticity အာရုံခံ accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 5820-5831 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ et al Moussawi K ကို Pacchioni တစ်ဦးက, Moran က M, သံလွင် MF, ဓာတ်ငွေ့ JT ။ N-acetylcysteine ​​ကင်း-သွေးဆောင် metaplasticity နောက်ကြောင်းပြန်။ နတ် neuroscience ။ 2009;12: 182-189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ mu P ကို, et al Moyer JT, Ishikawa က M, Zhang က Y ကို, Panksepp J ကို။ ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့သည် dynamically နျူကလိယ accumbens အာရုံခံ၏အခ်ါအမြှေးပါးစိတ်လှုပ်ရှားထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2010;30: 3689-3699 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Zhang က XF, Cooper က, DC, အဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းကုသမှုကြွက်နျူကလိယအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ်ကယ်လစီယမ်လက်ရှိအာရုံခံ accumbens လျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2002;301: 1119-1125 ။ [PubMed]
39 ။ Zhang က XF, Hu XT, အဖြူရောင် FJ ။ ကိုကင်းရုပ်သိမ်းရေးအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ် plasticity: နျူကလိယ accumbens အာရုံခံအတွက်ဆိုဒီယမ်ရေစီးကြောင်းလျှော့ချ။ J ကို neuroscience ။ 1998;18: 488-498 ။ [PubMed]
40 ။ ဟူ XT, Basu က S, အဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး HVA-Ca2 + အလားအလာဖိနှိပ်နှင့်အာရုံခံ accumbens ကြွက်နျူကလိယထဲမှာ K + လိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 2004;92: 1597-1607 ။ [PubMed]
41 ။ ဟူ XT, Ford ကား K ကိုအဖြူရောင် FJ ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး calcineurin (PP2B) လျော့ကျပေမယ့်ကြွက်နျူကလိယအတွက်ဆိုဒီယမ်ရေစီးကြောင်း၏ DARPP-32 မော်ဂျူအာရုံခံ accumbens ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 916-926 ။ [PubMed]
42 ။ ME Wolf ။ psychomotor စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းအတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ prog Neurobiol ။ 1998;54: 679-720 ။ [PubMed]
43 ။ Vanderschuren LJ, Kalivas PW ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက် ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl) 2000;151: 99-120 ။ [PubMed]
44 ။ ME ဝံပုလွေ, Ferrario CR ။ ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့ပြီးနောက်နျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA အဲဒီ receptor plasticity ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010;35: 185-211 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ ပီယပ် RC, ဘဲလ် K ကို Duffy P ကို, Kalivas PW ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းနျူကလီးယပ်အတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဂီယာသာအပြုအမူာင်းဖွံ့ဖြိုးဘဲလျက်ကြွက်များတွင် accumbens ကြီးထွားများပြားစေ။ J ကို neuroscience ။ 1996;16: 1550-1560 ။ [PubMed]
46 ။ Suto N ကို, Tanabe LM, Austin JD, Creekmore အီး, Pham မှန် CT, et al ။ psychostimulants မှယခင်ထိတွေ့နျူကလိယအားဖြင့်ကိုကင်းရှာ၏ reinstatement AMPA accumbens ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 2149-2159 ။ [PubMed]
47 ။ Cornish အဘိဓါန် JL, Kalivas PW ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အချိုမှုဂီယာကိုကင်းစွဲအတွက် relapse mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: RC89 ။ [PubMed]
48 ။ ME Balfour, ယု L ကို, Coolen LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29: 718-730 ။ [PubMed]
49 ။ Vialou V ကို, Robison AJ, Laplant QC, Covington သူ, 3rd, Dietz DM, et al ။ ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2010;13: 745-752 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Ferrario CR လီ X ကို, ဝမ်က X, Reimers JM, Uejima JL, et al ။ ကိုကင်းဖို့ locomotor ာင်းအတွက်အချိုမှု receptor ပြန်လည်ခွဲဝေမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35: 818-833 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ Boudreau AC အ, Ferrario CR, Glucksman MJ, ME Wolf ။ လမ်းကြောင်း adapter နဲ့ကင်းဖို့အမူအကျင့်ာင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဝတ္ထုပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးကအလွှာဟာအချက်ပြ။ J ကို Neurochem ။ 2009;110: 363-377 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ Boudreau AC အ, Reimers JM, Milovanovic M က, ME Wolf ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာဆဲလ်မျက်နှာပြင် AMPA receptors ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုး accumbens ပေမယ် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ၏ပြောင်းလဲ activation နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် Internalize အတွင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10621-10635 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Boudreau AC အ, ME Wolf ။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်တိုးမြှင့် AMPA အဲဒီ receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 9144-9151 ။ [PubMed]
54 ။ Kourrich S က, Rothwell PE, Klug JR, သောမတ်စ် MJ ။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် bidirectional Synaptic plasticity ထိန်းချုပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 7921-7928 ။ [PubMed]
55 ။ Ghasemzadeh ကို MB, Mueller ကို C, ကိုကင်းဖို့ Vasudevan P. အပြုအမူာင်းတိုးချဲ့ဆုတ်ခွာကာလပြီးနောက် postsynaptic သိပ်သည်းဆတိုးမြှင်အချိုမှု receptor လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ neuroscience ။ 2009;159: 414-426 ။ [PubMed]
56 ။ et al Mameli M က, Halbout B, Creton ကို C, Engblom: D, Parkitna JR ။ ကိုကင်း-evoked Synaptic plasticity: အ VTA အတွက်ဇွဲအဆိုပါ NAc in adapter တစ်ခုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ် neuroscience ။ 2009;12: 1036-1041 ။ [PubMed]
57 ။ နာမည်ကြီး KR, Kumaresan V ကို, Sadri-Vakili, G, Schmidt က HD ကို Mierke DF, et al ။ နျူကလီးယပ်အတွက် GluR2 ပါဝင်သော AMPA receptors ၏ Phosphorylation-မှီခိုလူကုန်ကူးမှုကင်းရှာ၏ reinstatement အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 11061-11070 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
58 ။ Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW ။ သက်တမ်းတိုးကင်းထိတွေ့နျူကလိယအတွက်ယာယီပြောင်းလဲထုတ်လုပ် AMPA အဲဒီ receptor-mediated အပြုအမူ accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 12808-12814 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Karler R ကို, Calder ld, Chaudhry IA, Turkanis လုပ် SA ။ MK-801 အားဖြင့်ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့ "ပြောင်းပြန်သည်းခံစိတ်" ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1989;45: 599-606 ။ [PubMed]
60 ။ Schumann J ကို, ထပ်ခါတလဲလဲ noncontingent ကင်းထိတွေ့မှုကနေ Yaka R. ကြာရှည်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် NMDA အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့် ERK လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 6955-6963 ။ [PubMed]
61 ။ Powell WS, Dominguez JM, Hull က EM ။ တစ်ဦး NMDA ရန်သုတ်ရည်ထိနှင့်ကြွက်များတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်တိုးမြှင်ချို့ယွင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2003;117: 69-75 ။ [PubMed]
62 ။ Fleming က AS, Kucera C. လိင်အတွေ့အကြုံကိုသက်ရောက်မှုပရိုတိန်း-ပေါင်းစပ် inhibitor, cycloheximide အသုံးပြုပုံနှင့် noncompetitive NMDA ရန်, MK-801 အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားကြသည်။ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Biol ပြုမူနေ။ 1991;56: 319-328 ။ [PubMed]
63 ။ Dominguez JM, Balfour ME, Lee က HS, Brown က JL, Davis က BA, et al ။ မိတ်လိုက်အထီးကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ NMDA receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007;121: 1023-1031 ။ [PubMed]
64 ။ Bisaga တစ်ဦးက, Padilla M က, Garawi က F, Sullivan ကနေ MA, ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစီးကရက်ဆေးလိပ်ဖို့ရှေးခယျြမှုအပေါ်အခြားရွေးချယ်စရာစစ်ကူနှင့်တဏှာ၏ Haney အမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Hum Psychopharmacol ။ 2007;22: 41-47 ။ [PubMed]
65 ။ Yonghui L ကို, Xigeng Z ကို, Yunjing B, Xiaoyan Y ကို, ကြွက်များတွင်အစားအသောက်နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါ MK-801 ၏နန်းအက်စ်အတိုက်အခံဆိုးကျိုးများ။ J ကို Psychopharmacol ။ 2006;20: 40-46 ။ [PubMed]
66 ။ Huang က YH, လင်း Y ကို, Mu P ကို, Lee က BR, Brown က TE, et al ။ Vivo ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုခုနှစ်တွင်အသံတိတ် synapses ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009;63: 40-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
67 ။ Liao D၊ Zhang X၊ O'Brien R၊ Ehlers MD, Huganir RL hippocampal အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက် morphological postsynaptic အသံတိတ် synapses ၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 1999;2: 37-43 ။ [PubMed]
68 ။ Pickard L ကို, နို J ကို, Henley JM, Collingridge GL, Molnar အီး Developmental Synaptic AMPA နှင့် hippocampal အာရုံခံနထေိုငျအတွက် NMDA အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် AMPA အဲဒီ receptor subunit ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 7922-7931 ။ [PubMed]
69 ။ Groc L ကို, Gustafsson B, Hans အီး AMPA အခြေတည်စ glutamatergic synapses အတွက်အချက်ပြ: အဲဒီမှာနှင့်မရှိ! ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006;29: 132-139 ။ [PubMed]
70 ။ မာရီ H ကို, Morishita W က, ယု X ကို, Calakos N ကို, Malenka RC ။ CaMKIV နှင့် CREB ၏ Vivo စကားရပ်ထဲမှာစူးရှသောအားဖြင့်တိတ်ဆိတ် synapses ၏မျိုးဆက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005;45: 741-752 ။ [PubMed]
71 ။ et al ဘရောင်း TE, Lee က BR, Mu P ကို, ဖာဂူဆန်: D, Dietz: D ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်းတစ်ဦးကအသံတိတ် synapses-based ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 8163-8174 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
72 ။ သောမတ်စ် MJ, Beurrier ကို C, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးအာရုံကြော Correlate ။ နတ် neuroscience ။ 2001;4: 1217-1223 ။ [PubMed]
73 ။ Feil J ကို, Sheppard: D, Fitzgerald PB, Yucel M က, Lubman ပစ, et al ။ စွဲ, compulsive မူးယစ်ဆေးရှာနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းညှိအတွက် frontostriatal ယန္တရားများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010;35: 248-275 ။ [PubMed]
74 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND ။ စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011;12: 652-669 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
75 ။ Davis က JF လြော့ရဲ M က, Di Sebastiano AR, Brown က JL, Lehman MN, et al ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင် maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67: 1199-1204 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76 ။ Chen က BT, Bower က MS, မာတင် M က, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Guillory လေး, et al ။ ကိုကင်းပေမယ့်သဘာဝကဆုလာဘ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်သလို passive ကင်းပြုတ်ရည်ဟာ VTA အတွက်မြဲ LTP ထုတ်လုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;59: 288-297 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77 ။ Kalivas PW ။ စွဲလမ်းမှု၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009;10: 561-572 ။ [PubMed]
78 ။ Belujon P ကိုရေ့ AA ကို။ Hippocampus, amygdala နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု: စွဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ထိခိုက်စေသည်ဟုအပြန်အလှန်စနစ်များကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2011;1216: 114-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79 ။ Ishikawa တစ်ဦးက, Ambroggi က F, Nicola သည် SM, Fields HL ။ အဆိုပါ amygdala ပံ့ပိုးမှုများကိုသာနှင့်တုံ့ပြန်မက်လုံးပေး cue မှ prefrontal cortex medial ။ neuroscience ။ 2008;155: 573-584 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80 ။ Stuber GD, Sparta DR, Stamatakis လေး, ဗန် Leeuwen WA, Hardjoprajitno je, et al ။ accumbens nucleus ဖို့ amygdala ကနေ Excitatory ဂီယာဆုလာဘ်ရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝ။ 2011;475: 377-380 ။ [PubMed]
81 ။ ဗန် Furth WR, Wolterink, G, ဗန် Ree JM ။ ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: ဦးနှောက်ကို opioids ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ dopamine ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1995;21: 162-184 ။ [PubMed]
82 ။ Everitt BJ, Cador M က, Robbins TW ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များအတွက် amygdala နှင့် ventral striatum အကြားအပြန်အလှန်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်တဲ့ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ။ neuroscience ။ 1989;30: 63-75 ။ [PubMed]
83 ။ Agmo အေအမျိုးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြွက်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res Protoc ။ 1997;1: 203-209 ။ [PubMed]
84 ။ နယ်လ်ဆင် CL, Milovanovic M က, များတွင် JB, Ford ကား Ka, Wolf က ME ။ စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်အချိုမှု receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့်လိုက်ပါသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ J ကို Neurochem ။ 2009;109: 35-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
85 ။ Gao ကို C, ME Wolf ။ Dopamine receptors prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် NMDA အဲဒီ receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ J ကို Neurochem ။ 2008;106: 2489-2501 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]